एक लाख ३५ हजारलाई कोरोनाविरूद्धको खोप लगाइने – BFM 91.2
विराटनगर, १८ फागुन । मोरङमा कोभिड–१९ विरूद्वको खोप एक लाख ३५ हजारलाई लगाइने भएको छ ।तेस्रो चरणको अभियानअन्तर्गत फागुन २३ गतेबाट खोप लगाउन सुरु गरिने स्वास्थ्य कार्यालय मोरङका प्रमुख डा. सुरेश मेहताले जानकारी दिनुभयो।
उहाका अनुसार ५५ वर्षमाथिका उमेर समूहलाई खोप लगाइने छ। उहाले तेस्रो चरणका लागि ७२ स्थानमा खोप केन्द्र निर्धारण गरिएको बताउनुभयो । मोरङमा पहिलो चरणमा पाँच हजार ८५९ र दोस्रो चरणमा पाँच हजार ३३४ जनाले खोप लगाएको स्वास्थ कार्यालयका सूचना अधिकारी धरणीधर निरौलाले बताउनुभयो।
← मोरङको सुनवर्षीमा ढिस्कोले पुरिएर युवतीको मृत्यु, महिला र बालिका घाइते
एम.एम.सी. क्लब बिराटनगर फाइनलमा प्रवेश →
एभरेष्ट फुटबल टुर्नामेन्टमा सम्पन्न